Mormii Garbagurraachatti har'a taasifameen dargaggoonni 3 ajjeefamani 3 ammoo madaa'an - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Namootni rasaasaan dhahaman, Hospitaala Kuyyuutti yaaliin wayita godhamuuf
Hiriira mormii aanaa Kuyyuu Magaalaa Garbagurraachaa keessa guyyaa har'aa ture irratti namootni 3 yoo ajjeffaman namootni sadi biroo miidhamuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibse.
Jiraataan magaalaa Garbagurraachaa tokko akka BBC'tti himetti hiriirrii namoonni kumaataamaan lakkaa'aman irratti qooda fudhatan ganama sa'aatii sadi irraa eegale gaggeeffamaa ture.
Hanga naannoo sa'aa saddeetii, loltoonni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa fiichee irraa dhufan namoota hiriira bahan irratti dhukaasa bananiittis hiriirichi nagaan gaggeeffamaa ture jedhu jiraataan kun.
Dhukaasa banameenis, dargaggoonni sadii Geetuu Tafarraa, Abrahaam Raggaasaa fi kan maqaan abbaa isaa hin baramne Biraanuu jedhamu ajjeefamuu isaanii nutti himan.
"Kanneen keessaa tokko mataa keessa waan dhawameef battalumatti du'e, gara Hospitaalaas hin geeffamne," jedhu.
Kanneen hafan lamaan reeffi isaanii Hospitaala Kuyyuu seenee qorannoon erga taasifamee booda maatiif akka kenname, hojii gaggeessaan hospitaala Kuyyuu Obbo Geetahun Poolisii, bilbilaan BBC'tti himaniiru.
Dargaggoonni rasaasaan dhayaman lama yaalii barbaachisaa argatanii gara manaa yoo galan tokko ammas hospitaalichatti yaalamaa akka jirus Obbo Geetahun dubbataniiru.
Kana malees haaluma achi tureen walqabatee, qabeenyaa irras miidhaa qaqabu isaa namoonni ni dubbatau.
Hiriirri mormii namoota kumaatamaan lakkaa'aman hirmaachisu tibbana magaalota Oromiyaa hedduu keessatti adeemsifamaa jira.
Hiriirota kanneen qaamni ifatti waame hin beekamne. Mootummaan Naannoo Oromiyaa fi xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo, hiriironni kunneen qaamolee Oromiyaan akka hin tasgabbofne barbaadaniin ta'e jedhamee qindeeffamaa jiru jechuun qeequ.
Torbee darbe keessa hiriira Oromiyaa bakka gara garaatti gaggeeffameen, magaalaa Shaashamanneetti lubbuun namoota 3, Caancootti namni 1, Boorana magaalaa Sooddaa keessatti namni 3, Harargee lixaa aanaa Bookeetti namni 3 yoo ajjeefaman namoonni 50 ol madaa'uun isaanii gabaafame ture.
"Hiriira bakka adda addaatti taasifamaa jiru kana keessatti alaabaa jaarmiyaalee adda addaa bal'inaan raabsuun, walitti bu'iinsi saba fi saba gidduuttii akka uumamu kakaasuun shira hamaa xaxaa kan jiran qaamota Oromiyaan dirree jeequmsaa akka taatu barbaadani," jedhu dubbi himaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa.
Galmi hiriira kanaas tokkummaa Oromoo yeroo ammaa cimaa dhufe cabsuu, hoggansa haaraa Naannoo Oromiyaa fi ummata addaan kutuu, Oromiyaa burkutooftuu fi hoggansa ija laafessa uumuun saamicha itti fufsiisuudha, jedhu Obbo Addisuun.
Namoota lubbuun isaanii darbeef Mootummaan Naannoo Oromiyaa gadda cimaa itti dhagaa'ame ibsuu barbaadas jedhaniiru Obbo Addisuun barreeffama fuula Feesbuukii isaanii irratti barreessaniin.
Gama biraatiin, Imbasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu, ibsa waaree kana baaseen ajjeechaawwan hiriirota mormii tibbana adeemsifamaa turan irratti raawwataman qoratamanii, kanneen yakka kana raawwatan seeratti dhiyaachuu akka qaban waamicha dhiyeessee jira.
''Abbaan koo jaarsi umurii 67 daandiirra osoo deemanii rasaasaan dhahaman'' ilma abbaan Shaashamanneetti irraa ajjeefame